ကလေးများ စကားပြော နောက်ကျနေပြီလား? ကလေးတို့ စကားပြော နောက်ကျတယ်လို့ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ။ – Burmese Baby
Guide to Speech Delays, Is healate talker?
မိဘ တိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးလေးတွေ ပြောလာမယ့် ပထမဆုံး စကားလုံးတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်စားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးက စကားပြောနောက်ကျရင် မိဘတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်စရာ၊ပူပန်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတော်တော်များများက အသက်(၂)နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာအခက်အခဲမှ မရှိပဲ စကားပြောလာတတ်ကြပါတယ်။ ကလေး ၄ယောက်မှာ ၁ ယောက် ဟာ စကားပြောနောက်ကျနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် အထူးထောက်ကူပြုမှု မလိုပဲ အဆင်ပြေ သွားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးရဲ့ စကားပြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ specialist ပြသင့်ပြီလဲ ဆိုတာတော့ မိဘများ သိထားသင့်ပါတယ်။
ကလေး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဟာ ဖွံဖြိုးမှု မတူပါဘူး။ ယေဘုယျ အားဖြင့်တော့
– ကလေးဟာ အသက် တစ်နှစ်အရွယ်မှာ စကားလုံး တစ်လုံးပြောနိုင်သင့်ပါတယ်။ ( ဥပမာ= မေ၊ပေး၊ဘဘ)။
-အသက် ၁၈လ ကနေ ၂ နှစ် မှာတော့ စကားလုံး ၂- လုံးတွဲ ပြောနိုင်နေသင့်ပါတယ်။( ဥပမာ= မန်မန်စား၊ ရေသောက်၊ ကောင်းတယ်၊ ပေးပါ)
-အသက် ၃- နှစ် မပြည့်ခင်မှာတော့ စကားလုံး သုံးလုံးပါ စာကြောင်းပြောနိုင်နေပါပြီ။ (ဥပမာ= စာအုပ်ယူပေးပါ။ ပြေးလာမယ်။ သားကစားမယ်)
ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၈ လ ကလေး တစ်ယောက်ဟာ စကားလုံး ၅၀-၁၀၀ လောက် ပြောနိုင်တတ်ပေမယ့် သူနားလည်နိုင်တာကတော့ အဲဒီထက်ပိုပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အမူအယာ လုပ်ပုံတွေ၊ ညွှန်ကြားပြောဆိုတာတွေကို လိုက်လုပ်တာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့လဲ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဆက်ဆံနိင်စွမ်းကို အကဲခတ်နိုင်တာမို့ စိုးရိမ်စရာ အကြောင်းက နည်းပါးပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ကလေးရဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက်ကြောင့်လဲ စကားပြောနောက်ကျနိုင်ပါတယ်။ မိဘ က လိုတာတွေအားလုံး ကလေးတောင်းစရာ၊ပြောစရာမလိုပဲ လုပ်ပေးရင်၊ ကလေးကို ပြောခွင့်၊ စဉ်းစားခွင့်မျိုးမပေးပဲ ကြိုပြောပြီး လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးဆိုရင်လဲ ကလေးက စကားပြောဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။
ဥပမာ- ကလေးက ရေခွက်တင်ထားတဲ့နားလာနေတာကို “သားက ရေခွက်လိုချင်လို့လား။ ရေငတ်လို့လား။ ရော.သောက်။ မကိုင်နဲ့ ။ ဖိတ်ကုန်မယ်။ မေမေ တိုက်မယ်” ဆိုရင် ကလေး က ဘာမှ ပြောစရာ၊ လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ကြိုးစားစရာလဲ မလိုတော့ပါဘူး။ ပြောခွင့်လဲ မရလိုက်ပါဘူး။
အဲဒီအစား…. ကလေးလာနေရင် သူရေလိုချင်မှန်းမေမေ သိပေမယ့် ” သားဘာလိုချင်လို့လဲ” ဆိုပြီး သူ့ကို မေးပါ။ပြီးတော့ စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပေးပါ။ ကလေးက အသံ အနည်းငယ်ပြုလာရင် “ရေလား… သားလေးက ရေ သောက်ချင်တာလား” လို့ ဖြေးဖြေးပြောပြီးမှ ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေး က” ရေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မှတ်မိအောင်ပါ။
သားယောက်ျားလေးများက မိန်းကလေးထက် စကားပြောနောက်ကျတတ်ပါတယ်။ ၁၆လ သားမှာ ယောက်ျားလေးများက စကားလုံး ၃၀ ပြောနိုင်နေရင်၊ မိန်းကလေးများက ၅၀ လောက်ပြောနိုင်တတ်ပါတယ်။
လမစေ့ပဲမွေးသော ကလေးများ၊ပျမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန်အောက်မွေးဖွားသောကလေးများ၊ မွေးစမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တစ်ခုခုရှိသော ကလေးများဟာ စကားပြောနောက်ကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေပိုများပါတယ်။
အကယ်၍ ကလေးရဲ့ ပထမနှစ်အတွင်းမှာ နားထဲရေဝင်တာကြာတာမျိုး၊ နားနာခြင်း( ear infection) ဖြစ်ထားတာမျိုးဆိုရင် ကလေးရဲ့ အကြားအာရုံကို အားနည်းစေနိုင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကလေးဟာ စကားပြောရမယ့် အရွယ်မှာ အခက်အခဲဖြစ်ပြီး စကားပြောနောက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ စကားပြောတာနောက်ကျတယ် ဒါပေမယ့် သူရဲ့ တခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ က ပုံမှန်တိုးတက်နေတယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ အခြားစွမ်းရည်တွေကို အာရုံစူးစိုက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- လမ်းလျှောက်ခြင်း။ ( စကားပြောမယ့်အစား)
စကားပြောနောက်ကျခြင်း( speech delay) ဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့ လက္ခဏာများ
အသက်၂-နှစ်မတိုင်ခင် ကာလမှာ စကားမပြောသေးရင် သာမန်ပဲလို့ စဉ်းစားလို့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် အချို့လက္ခဏာတွေကတော့ ကလေးဟာ ကုသမှု အကူအညီ လိုနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြပေးပါတယ်။
ကလေး သံလေးနဲ့ ဗလုံးဗထွေးပြောတာ၊ မပီကလာ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ စကားတွေပြောတာမျိုး လုံးဝမရှိဘူး။ ဖေဖေ မေမေ တို့ စကားပြောတဲ့အခါ နားလည်တဲ့ ပုံစံမပြဘူး တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူး။
ကလေးဟာ အနည်းးဆုံး စကားလုံး တစ်လုံး တောင် မပြောသေးဘူး။
ကလေးဟာ စကားလုံး နည်းနည်းလေးပဲပြောတယ်။ အများအားဖြင့် တိုးတိုးလေး မသဲကွဲပဲ ပြောပြီး၊ လက်ညှိုးထိုးပြီးပဲ ဆက်ဆံမှုကို လုပ်တယ်. ဒါမှမဟုတ် ကလေးဟာ သူရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည် လျော့ကျလာတယ်။ ( အရင်က ပြောနေကျ စကားလုံးတွေကို မပြောတော့တာမျိုး၊ အရင်ကနည်းနည်းပါးပါးပြောပြီးနောက်လုံးဝမပြောတော့တာမျိုး)
အသက် ၂ ၁/၂ နှစ်မှာ
ကလေးဟာ အ၊အီ၊အို စသည်ပဲ အသံထွက်ပြီး စကားလုံး အပြည့်စုံ အသံမထွက်ခြင်း (သို့) စကားလုံး ၅၀ ခန့် မပြောတတ်ခြင်း။
ကလေးရဲ့ အသံထွက်ကို လူစိမ်းများ နားမလည်ခြင်း။ (သို့) စကားလုံး ၂လုံးသာ ပါတဲ့ စကားကိုပြောတတ်ခြင်း။ဥပမာ- ရေသောက်၊ စားချင်၊
ကလေးဟာ Late bloomer နှောင်းပန်းလေးများဆိုရင်လည်း ၂နှစ်ခွဲလောက်မှာ အမီလိုက်နိုင် catch up လုပ်နိုင်နေပါပြီ။ ဒီအရွယ်မှ မပြောရင် ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ တိုင်ပင်ပြသသင့်ပါပြီ။
အသက်၂နှစ်မတိုင်ခင်မှာ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီး စကားလုံးတွေ သင်ယူတာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို အသံထွက်ပြီးစာဖတ်ပြတာ၊သီချင်းဆိုတာ၊ မေးခွန်းမေးပြီး ဖြေချင်လာအောင် လမ်းဖွင့်ပေးတာ တွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာပူဖောင်းမှုတ်ပြီး ကစားတာဟာ ခံတွင်းကြွက်သားတွေကို ဖွံ့ဖြိုးသန်မာစေပါတယ်။ ဖုန်းပြောတမ်းကစားတာ၊ သရုပ်ဆောင်ကစားတာတွေဟာ စကားပြောခြင်းကို အားပေးပါတယ်။
ဖေဖေ မေမေတို့ အနေနဲ့ ကလေးစကားမပြောသေးဘူးလားလို့ အမေးခံရတာ ကို ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်လာပြီဆိုရင် အောက်ပါ ထင်ရှားသူတွေဟာ သူတို့ ၂နှစ်မတိုုင်ခင် စကားမပြောကြပါဘူး ။ တစ်ချို့ဆို ၄ နှစ်မှပြောပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းက ဖွံဖြိုးမှု မတူပါဘူး။ တချို့က လွယ်လွယ်ကူကူ စောကြီးပြောပေမယ့် တစ်ချို့က နောက်ကျပါတယ်။ နောက်ကျမှပြောတဲ့ ကလေးတွေဟာလဲ နောက်ပိုင်း ပုံမှန် ပြောလာတတ်ကြပါတယ်။ မိမိတို့ ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိရင် တွေဝေစောင့်ဆိုင်း မနေပဲ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ပြသသင့်လှပါတယ်။ ဒါမှ လိုအပ်သော ကူညီမှု treatment ကို ပေးမှ ကလေးဟာ ပိုကောင်းလာနိုင်မှာပါ။